War Deg deg ah – Rasaasa News
Feb 3, 2012 War Deg Deg ah
War deg deg ah oo goor dhaw naga soo gaadhay magaalada Garissa ee xarunta u gabalka Waqoyin bari Kenya ayaa sheegaya in dabley aan wali la aqoonsan ay toogasho ku dileen labo ruux labana dhaawaca kaga tageen.
Labada marxuun ee dhintay ayaa la kala yidhaahdaa Mawiliid Cali Digaale Iyo Cabdi Nuur Xuseen, labada Dhaawaca ah ayaa la kala yidhaahdaa Nuur Sheekh Yuusuf Iyo Maxamud Cumar Feen. Labada wiil ee dhaawaca ayay xaaladoodu aad u adagtahay laguna daawaynayaa Isbitaal magaalada Garrissa.
Afarta ruux ee labona dhimatay labona dhaawaca tahay waxay ka soo jeedaan degaanka Somalida Ethiopia, waxayna mudooyinkii u dambaysay ku sugnaayeen dalka Kenya.
Hore dalka Kenya waxaa uga dhacay dilal badan oo loo gaystay dad ka soo jeeda degaanka Somalida Ethiopia, dilalkaas oo dhamaantood lagu eedeeyey kooxda UBO oo ka dagaalanta degaanka Somalida Ethiopia.
Dawlada Kenya ayaa hore u sheegtay kooxda UBO ay shido ka wado gudaha dalka Kenya, xidhayna qaar kooxda ka mid ah in kasta oo kolkii dambe la siidaayey.
Dad bada ayaa dirba farta ku fiiqaya in dilkan cusub ay lug ku leedahay kooxda UBO. Anaga oo aan ka hor dhicin waxaan isha ku hayn doonaa kolba wixii ka soo kodha warkan cusub.
Waxaan Eebe Weyne uga baryeynaa in wiilasha dhaawaca ah uu siiyo laydh caafimaad. Waxaa kale oo aan tacsi u diraynaa ehelada wiilsha dhintay in uu Eebe samri ka siiyo iyagana geeyo Janada.